Kedu otu Innovation si egbu ụlọ ọrụ gị | Martech Zone
Kedu otu Innovation si egbu ụlọ ọrụ gị
N'abalị a, mụ na onye nkụzi m nọ na mkparịta ụka kpụ ọkụ n'ọnụ. Ọ bụghị ihe ijuanya, m kpụ ọkụ n'ọnụ… bụghị onye ndụmọdụ;). Na nkparịta ụka a bụ ụlọ ọrụ nke anyị abụọ nwere mmasị na ya. Nchegbu m na ụlọ ọrụ ahụ bụ na ha nọ adịghị anapụta na nkwa nke ngwọta ha. Arụmụka ya bụ na ọ kwenyere na ha abụọ bụ otutu ma nwee ihe ịga nke ọma n'iwepụ anya nke ndị isi mmetụta na ụlọ ọrụ ahụ.
Ihe ohuru bu ihe ohuru. Ihe mgbaru ọsọ gị ekwesịghị ịbụ otutu, ihe mgbaru ọsọ gị kwesịrị ịbụ bara uru. Video: Site 37 Mgbama, Jason Eghe na Innovation
Eji m obi m niile kwere.
Tupu isi gi agbawa… bara uru nwere ike bụrụ ihe ọhụrụ. Mana ịbụ onye ọhụụ apụtaghị na ọ bụ ihe ọhụụ bara uru. Companylọ ọrụ ahụ anyị na-ekwu maka ya bụ sistemụ njikwa njikwa na - eme ka ibipụta na ịhazi ọdịnaya dị mfe yana kachasị maka igwe nchọta ọchụchọ. Ọ bụ a siri ike n'elu ikpo okwu na ihe ịrịba akụrụngwa. Tụfuo otu ndị dere ọdịnaya na ya ma ha nwere ike ibipụta na-enweghị isi.
Nsogbu bụ na, mgbe mgbe, ọdịnaya bụ abụghị kachasị. Na-abụghị, enwere nnukwu oghere na njikarịcha nke na-ebelata ohere maka ọdịnaya ka edepụtara ọdịnaya ahụ nke ọma site na injin ọchụchọ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ikpo okwu bụ abaghị uru.
Onye nkụzi m kwetara na ha na-agba mgba mgbe etinyechara ha na ụmụ SEO site na ụlọ ọrụ. N'ezie ha nwere! Gịnị mere o ji ju ya anya? Y’oburu na inwere ufodu n’ime ihe di nkpa nke ichoputa ikpo okwu gi, igha agha ndi ahia gi n’ime SEO oge obula. Ha kwesiri.
Ulo oru nke ulo oru a bu ihe omuma nke Intanet nke ozo iji weghachite webinar, onye ndu ulo oru iji schmooze ya, onye ode akwukwo iji kwalite ahia, ihe omuma iji kwụọ ụgwọ, ma obu ihe ohuru iji bia olile anya. N'uche m, ekwenyere m na ụzọ ndị a niile bụ igbu oge, ume na ego.. Echere m na ụlọ ọrụ ahụ na-eme ndị ahịa ha nsogbu ma na-akwụ ụgwọ maka ya. Ha anaghị ebi na-atụ anya na ha enịm ke ahịa usoro… na ha na- bara uru.
N'ihi nke a, ụlọ ọrụ ha anaghị etolite na mmalite nke ahụike ndị ọzọ dị mma. N'adịghị nke ahụ, ndị otu na-akwado ha nwere nkụda mmụọ, ndị ọrụ agbanweela dị elu, njide ha na-ata ahụhụ. Ntọhapụ ọ bụla na-eweta atụmatụ ọhụrụ ndị ọzọ na-emepụta nsogbu na nsogbu ndị ọhụrụ.
Ihe a niile na-eduga na aha ụlọ ọrụ ahụ nọ n'ihe egwu. Enwere m oge na-aga ịkwaga ụlọ ọrụ n'elu ikpo okwu ọ bụ ezie na ahụrụ m ikike dị egwu na ụlọ ọrụ ahụ. Ozugbo ha laghachi bara uru, Enweghị m obi abụọ ọ bụla na ha ga-ewe ezigbo ibu.
Otú ọ dị, ka ọ dị ugbu a, ihe ọhụrụ na-egbu ha.
Iwekota Enyemaka Gị na Twitter